Maitiro Ekugadzira Instagram Vhidhiyo Ads Anokutorera Iwe Mhedzisiro | Martech Zone
China, April 16, 2020 Wednesday, April 15, 2020 Cristian Stanciu
Instagram ads inoshandisa Facebook yakazara uye yese-inosanganisira kushambadzira system iyo inoita kuti vanhu vatarise vashandisi zvinoenderana nezera ravo, zvido uye maitiro.
63% yemasangano evashambadziro anoshanda muUS yakaronga kuisa Instagram kushambadzira kune avo vatengi.
Kunyangwe iwe uine bhizinesi diki-saizi kana rakakura-chikamu sangano, Instagram vhidhiyo kushambadzira inopa inoshamisa mikana kune wese munhu kuti asvike kune avo vanotarisirwa vateereri. Asi, pamwe nekuwedzera kwenhamba yemakemikari kuva chikamu che Instagram, makwikwi ari kuwedzera hasha uye kukwikwidza.
Chimwe chakadzoserwa kumashure icho vanhu vazhinji vanacho ndechekuti kugadzira vhidhiyo zvemukati hakusi sekutora pikicha kana kugadzira zvakanyorwa zvemukati. Neraki, iwe unogona kugadzira zvinoshamisa mavhidhiyo uchishandisa yemahara stock stock vhidhiyo.
Kana iwe usiri kujairana nezwi iri, masheya evhidhiyo ndeyeumambo mahara emahara iwe aunogona kutenga kodzero dzayo kuburikidza nemawebhusaiti akasiyana. Uye kune matani enzvimbo dzekutora kubva. Heino runyorwa rwe
Kudzoka mu2015, Instagram yakaunza ma ads e Instagram ayo anobatsira varidzi vemabhizinesi kuti vasvike kune rimwe boka revashandisi uye vopedzisira vavashandura kuva vatengi vangangoita. Nekushandisa iyo Facebook kushambadzira, vezvenhau veshambadziro vatengesi vanogona ikozvino kunongedza chero chaiyo chikamu chevanopfuura mamirioni mazana matanhatu vanoshandisa Instagram vashandisi. Zvese mune zvese, pane yakakura mukana mukana ipapo, kungomirira iwe.
Bhura pasi kuti udzidze zvimwe zvekutanga zvine chekuita nekugadzira uye nekumhanya vhidhiyo-yakavakirwa Instagram ads. Pamusoro peizvozvo, isu zvakare ticharatidza mashoma mashoma maitiro ekuyera uye kusimudzira yako kushambadzira mashandiro. Asi zvisati zvaitika, tanga nekukurumidza tarisa iwo mashanu makuru ezvikamu zve Instagram vhidhiyo kushambadzira iwe unogona kumhanyisa kusimudzira vateereri vako.
Mhando dzeVhidhiyo Ads ye Instagram
In-Kudya Vhidhiyo Ads - yakakurumbira Instagram vhidhiyo kushambadza chikamu umo vhidhiyo kushambadza zvisina musanganiswa inosanganiswa muzvishandiso zvemushandisi uye nekupa imwe yakasarudzika nzira yekusvikira kune vako vanotarisirwa vateereri.
Instagram Stories - yakazara-skrini vhidhiyo kushambadza kunoonekwa pakati penyaya dzinenge mazana mana evashandisi vanoona zuva nezuva (kubva kune vashandisi vavanotevera). Nekuti Instagram Stories ratidza kune yakavharirwa maawa makumi maviri nemasere hwindo, ivo vakanakira kushambadzira zvinhu zvekushambadzira uye mashoma-nguva madhiri uye zvinopihwa.
Carousel Ads - NeCarousel ads, ivo vashambadziri vane sarudzo yekusimudzira chakasarudzika chigadzirwa kana sevhisi nekuratidzira akateedzana emavhidhiyo emavhidhiyo ayo vashandisi vanogona kusevha kuburikidza nawo. Uku kuiswa kwakanakira mabrandari arikutsvaga kushambadza zvemukati zvemukati kana kungoda kuratidza ruzivo rwakadzama maererano nezvavari uye nezvavanopa. Pamusoro peizvozvo, vanogona zvakare kuwedzera chinongedzo kune webhusaiti yechigadzirwa kuti vatungamire vatengi vanofarira kutenga chigadzirwa.
30-Yechipiri Vhidhiyo Ads - Yechitatu-yechipiri vhidhiyo kushambadza yakaunzwa ne Instagram mukuyedza kugadzira inowirirana cinematic kunzwa kune vashanyi vanovakurudzira kuburikidza neinonakidza yekuona kugona.
Instagram Marquee - Instagram ichangobva kuburitsa chimwe chishandiso chinonzi 'Instagram Marquee' chinoita kuti vatengesi vaparadzire uye vasvike kune vateereri munguva pfupi.
Kutanga ne Instagram Vhidhiyo Ads
Usati watanga kugadzira kushambadzira kwako, zvakakosha kuti udzidze zvimwe zvezvinodiwa zvinogona kukanganisa hunhu hwese uye mashandiro eako Instagram kushambadzira:
Instagram inobvumira a kureba kwemazita asina mavara anodarika mazana maviri nemakumi maviri. Asi, edza kusapfuura 2200-135 mavara ezvakanakisa mhedzisiro
The kureba kwemavhidhiyo haifanire kudarika masekondi zana nemakumi matanhatu
Iwo mavhidhiyo mafaera anofanira kunge ari mu MP4 kana MOV fomati ine saizi yega yega faira isina kukura kupfuura 4GB
In-feed vhidhiyo kushambadzira hakufanirwe kupfuura 600 × 750 (4: 5) yemavhidhiyo akamira. Kana iri vhidhiyo yemamiriro ekunze, resolution yacho inofanirwa kunge iri 600×315 (1:91:1) nepo yemavhidhiyo akaenzana, inofanirwa kunge iri 600 × 600 (1: 1)
Kune Instagram nyaya, iyo resolution inofanirwa kuve 600 × 1067 (9: 16)
ZveCarousel vhidhiyo kushambadza, iyo chaiyo resolution iri 600 × 600 ine 1: 1 chiyero chechikamu
Zvino, kubva pane zvakaitika kwandiri mushure mekupa vhidhiyo ekugadzirisa masevhisi kumazana evanogadzira zvemukati, ndakaona kuti 1: 1 uye 4: 5 kushambadzira kwevhidhiyo vanoita zvirinani. Saka, pese paunogona, edza kunamatira kune icho chikamu reshiyo.
Maitiro Ekugadzira Instagram Vhidhiyo Ads Inokutorera Iwe Mhedzisiro - Nhanho nedanho Gwara
Neraki, hapana roketi sainzi inosanganisirwa mukugadzira yepamusoro Instagram vhidhiyo Ads. Simply, tevera iyi nhanhatu-nhanho gwaro rekutanga kuti utange:
Nhanho 1: Sarudza Chinangwa
Kutanga uye zvakanyanya kukosha, iwe uchafanirwa kusarudza chinangwa. Zvichitaurwa zviri nyore, iwe unofanirwa kutsanangura yako chinangwa chokudhindapasi pechikamu ichi kuratidza chinangwa chaicho chaunoda kuti shambadziro yako ibudirire. Uri kutsvaga kuwedzera brand kuziva kana chinangwa chako ndechekusimudzira kutengesa kwako? Ive nekuchenjerera kwazvo mukusarudza mhinduro dzemibvunzo iyi sezvo ichigona kukanganisa kuiswa uye kukubatsira iwe kusvika kune vateereri vako vaungangoda kupindura kushambadziro dzako.
Nhanho 2: Sarudza Vateereri Targeting
Ichi ndechimwe chinhu chakakosha chinokanganisa shanduko dzako. Kana kunongedza kusiri kushanda, iwe haugone kunongedza rakanangana neboka revashandisi. Iwe unogona kusarudza nzvimbo, zera, mutauro, murume kana murume kana chero imwe sarudzo inosarudzwa yekunangisa. Kunyangwe iwe uri kutsvaga kunongedza chero rakatarwa zera boka rine mamwe mararamire, iwe unogona kuzviita futi.
Saka ita shuwa kuti une vateereri vanonongedza mukutarisa neimwe nzira hapana anozoona zvemukati zvako.
Nhanho 3: Rongedza Kuiswa Kwako
Mushure mekusarudza vateereri vako vachinongedzera, sarudza izvo zvaiswa. Paunodzvanya iyi sarudzo, iyo Instagram uye Facebook kuisirwa kwave kutogoneswa. Kazhinji, iwe unofanirwa kuchengeta zvese izvi kuiswa zvinogoneswa kuti uwane mhedzisiro yakanaka. Nekudaro, kana iwe uine zvimwe zvaunofarira kana iwe uchida kusabvisa chero chinhu chakasarudzika, unogona kugadzirisa sarudzo kuti uenzanise zvaunoda.
Nhanho 4: Budget uye Chirongwa
Kana iwe uri kusarudza bhizimusi remanyore, iwe unofanirwa kuseta bhajeti yako uye bhidha kune yako kushambadzira. Chaizvoizvo, bhajeti yako inoratidza iyo yakazara mutengo iwe waunoda kuisa kune imwechete bhatani / imwe nhamba yezviratidzo kana pane chero chimwe chinhu chakati. Iyi nhanho zvakare inobvumidza iwe kuseta yekutanga uye yekupedzisira zuva kune ako ma ads.
Nhanho 5: Gadzira iyo Ad
Nekudaro, iwe ikozvino wagadzirira kugadzira yako yega Instagram kushambadzira. Simply, sarudza yako yaunofarira shambadziro mhando woisa zvese munzvimbo yacho. Zvakare, ita shuwa kuti utarise vhidhiyo yako kushambadza kuti uone kuti ichataridzika sei mune yekudya. Ive neshuwa kuti kushambadzira kwako kunotaridzika kwakakura pane kwese kuiswa uye zvakare kwakatemwa zvakakwana. Sanganisira chinongedzo chaunoda kuti shambadziro yako iende nevashandisi kune iyo peji yekumhara sezvo ichizokwezva vatengi uye kusimudzira kutengesa. Usakanganwa kuwedzera zvinoshamisa kufona kuti zviitwe (CTA) kukurudzira vashandisi kudzvanya iyi link yako. Panguva ino, iwe unogona zvakare kuwedzera mune yako kopi mumitauro yakawanda kana uri kunanga vateereri vaviri.
Nhanho 6: Tumira Yako Ad kushambadziro
Nekutsoropodza ongorora kushambadzira kwako kweyekupedzisira nguva uye kana zvese zvikaita kunge zvakanaka munzvimbo dzese, isa pasi kuti zviongororwe. Zvinotora mazuva akati kuti kopi yako ibvumidzwe.
Mamirioni eDhora Instagram Vhidhiyo Ad Matipi
Gadzira Yakakwana Hook - Ramba uchifunga, vashandisi ve Instagram vanokurumidza kupururudza kuburikidza nenhau yavo, saka iwe unofanirwa kugadzira masekondi ekutanga eshambadziro yako kuverenga. Sezvineiwo, iwe unofanirwa kusanganisira kufamba uye zviito mumasekonzi matatu ekutanga evhidhiyo yako kuti utore kutariswa. Kana masekondi ekutanga eshambadziro yako achinonoka uye akanyarara, vashandisi vachapfuura nekusaona vhidhiyo yako.
Vhidhiyo yekugadzirisa - Kugadzira banger montage iyo inomira kunze kubva korona yakakosha zvakanyanya. Saka usaregeredza iye vhidhiyo yekugadzirisa maitiro. Mushure mekupedza kutora firimu usangoisa zvimisikidzo zvakasvibira ku Instagram. Tora nguva yekugadzirisa ako mavhidhiyo munzira inobata, inokwezva maziso.
Wedzera Nhamba - Sezvo, iyo odhiyo sarudzo yakaiswa pamumumu nekutadza, iwe unofanirwa kuwedzera mamwe mameseji kuti uwane meseji yako kuyambuka. Kune akawanda maapplication anowanikwa mazuva ano seApple clip ayo anogona kukubatsira iwe kugadzira ine simba mameseji mhedzisiro kuti utore kutarisisa.
Gadzirisa Dambudziko - Chinangwa chekugadzira Instagram kushambadza ndechokuziva dambudziko uye nekugadzirisa mhinduro kwayo muchimiro chechimwe chigadzirwa / sevhisi. Kana shambadziro yako ikapa fungidziro yesolver solver, inobva yatanga hukama pamwe nemushandisi. Paunenge iwe waita kuti vabudirire kuita, varatidze kuti chako chigadzirwa / sevhisi inogona sei kuva muponesi kwavari.
Dzivisa ma Capture marefu - Ipo Instagram ichibvumidza mavara mazana maviri nemazana nemanomwe, zviri nani kuichengeta ipfupi uye ine chinangwa. Mushure mezvose, hapana munhu anoda kuverenga mabhuru makuru ezvinyorwa zvakaomarara. Nekudaro, ita shuwa kuti haupfuure mavara 2200-130 uchinyora chinyorwa cheako Instagram kushambadzira.
Tarisa pane chimwe Chinhu Chinangwa - Panzvimbo pekutarisa zvinangwa zvakawanda, edza kunamatira kuchinangwa chimwe chete. Kana kushambadzira kwako kuchisanganisira akawandisa ekutengesa mapoinzi, zvinoita sekunge pombi uye vashandisi vanongo pfuura kupfuura kushambadzira kwako.
Akasanganiswa Zvakarongeka - Shambadziro dzako dzakagadzirwa hadzifanirwe kunzwika senge dzekukurudzira uye dzinofanira kusanganisa zvine mutsindo muma Instagram feeds. Ramba uchifunga, chinangwa chako ndechokubata vateereri vako uye nekuvapa mhinduro inogoneka kumatambudziko avo.
bvunzo - Zvakakodzera, iwe unofanirwa kugadzira akawanda mavhezheni evhidhiyo yako kushambadza kuti utarise kuti ndeipi inoshanda zvakakwana neako vateereri vateereri. Ita shuwa kuti yako Instagram kushambadzira iri kupa chiitiko chakakura uye vashandisi vari kunanga kutendeuka.
Instagram inogona kuve yakakura kushambadzira chikuva, ichigonesa iwe kuti usango gadzira chiziviso chiziviso uye wedzera yako brand kuburikidza nevhidhiyo uye inowirirana inoonekwa yezvinhu, asi zvakare fambisa organic traffic kune yako webhusaiti uye kukurudzira kutendeuka.
Ndeapi mamwe matipi aungawedzera pane urwu runyorwa? Ndezvipi zvaunoronga kuedza kutanga? Ndizivisei muchikamu chemashoko pazasi uye ndingafare kujoina hurukuro.
Tags: sei instagram vhidhiyo adsinstagram kushambadzainstagram carousel adsinstagram vhidhiyoinstagram vhidhiyo saizi saiziinstagram vhidhiyo kushambadza matipiinstagram vhidhiyo yekushambadzira matanhoinstagram vhidhiyo chinyorwainstagram vhidhiyo yekugadzirisainstagram vhidhiyo zvinyorwainstagram mavhidhiyo
Cristian Stanciu akazvimiririra vhidhiyo mupepeti, muridzi uye post-kugadzirwa murongi we Veedyou Media - kambani inopa vhidhiyo yekugadzirisa masevhisi kune vhidhiyo vanyori, vamiririri vekutengesa, vhidhiyo yekugadzira studio kana mabhureki pasirese.